Chirangaridzo University of Newfoundland (Mun) - Kudzidza muCanada
Chirangaridzo University of Newfoundland
guta : St. Johani
inotangwa : 1925
Students (approx.) : 19000
Musakanganwa kuti kurukura Memorial University of Newfoundland
Kunyoresa pana Memorial University of Newfoundland
Sezvo Newfoundland uye Labrador kuti yunivhesiti chete, Chirangaridzo ane vaitire vanhu mudunhu iri. Rinogadzwa chive chirangaridzo Newfoundlanders vakarasikirwa noupenyu hwavo pamusoro muchiuto munguva First uye Second World Wars, Chirangaridzo University anokwevera rakafuridzirwa kubva izvi zvachose nezvibayiro kare sezvo isu kubatsira kuvaka ramangwana nani dunhu redu, nyika yedu uye nyika yedu.
Tiri multi-kembasi, multi-chirango, ruzhinji rwevanhu, Dzidziso / tsvakurudzo yunivhesiti vakazvipira nounyanzvi zvose zvatinoita. Tinoedza kuva nyika uye pasi pose zvazvinoita, apo kuzadzikisa kwedu munzanga atenderwa kupa kuwana dzidzo yokuyunivhesiti vanhu enyika uye kuti pave evanhu, zvetsika nemagariro, kwesayenzi uye upfumi kukudziridzwa Newfoundland uye Labrador uye mberi.
Chirangaridzo ane zvinopfuura 18,500 vadzidzi kupararira mhiri mana pazvikoro uye kusvika 85,000 alumni zvinoshingaira munyika yose. Kubva anoedza dzomunharaunda kutsvakurudza zvaMambo National hanya, Chirangaridzo kuti was Runonzwika kure.
Chirangaridzo University achava mumwe anokudzwa zvikuru voruzhinji mumayunivhesiti muCanada uye mberi, uye achazadzisa zvayo mutoro chaiwo vanhu Newfoundland uye Labrador.
Chirangaridzo University chinhu yemubatanidzwa munharaunda yakatsaurirwa kuna utsanzi nounyanzvi hwokudzidzisa uye kudzidza, tsvakurudzo, kudzidza, rokusika basa, basa uye voruzhinji kuroorana.
Chirangaridzo anogamuchira uye anotsigira vadzidzi uye nyanzvi vaibva munyika yose uye inoita ruzivo uye unyanzvi zvekwaunogara, munyika nepasi rese.
umbirimi: Anokurudzira uye kusimudzira zvakaisvonaka kuburikidza utsanzi zvinhu uye, nehasha uye pragmatism.
kuvimbika: Kuva akatendeseka uye zvetsika zvine mune mukukurukurirana zvose, tiine soro yetsika mukudzidzisa, tsvakurudzo, rinoitirwa kuroorana uye basa.
Collegiality: Vachiita vamwe noruremekedzo, kubudirana pachena uye kuvimba mukutsvaga nevakawanda chinangwa, ndine hanya vanhu, neururami uye kupfungwa yose.
Inclusiveness uye kusiyana: Embracing uye kuita basa hunovimbisa kusiyana uye zvakarurama.
Kugamuchira: Kuva kugamuchira vanhu nemunharaunda.
kuzvidavirira: Kubvuma mutoro chingati zvinowanzobata nezvinangwa uye nezvinangwa.
Freedom uye Discovery: Kutsigira rusununguko kutsvaka ruzivo kunobva munhu uye mupurazi noungwaru, chiringa, unyanzvi zvinhu uye.
ndangariro: kubvuma, tangibly, zvose zvine chokuita yunivhesiti zvebhizimisi kusanganisira dzidziso uye kudzidza, tsvakurudzo, kudzidza, rokusika basa uye voruzhinji kuroorana.
Responsibility kunzvimbo: Kukoshesa uye kuzadzika unokosha vaitire vanhu Newfoundland uye Labrador achitsigira uye chivako kukwanisa zvakaisvonaka kuti:
anotaura zvinodiwa uye nemikana Newfoundland uye Labrador;
unogadzirira yunivhesiti nharaunda panyaya dzakawanda kukosha;
unobereka uye anovarwira kwomudzidzi zviro- dzakawanda caliber; uye,
anoona simba mikana akapa mumwe multi-kembasi inisitichusheni.
Basa vadzidzi: Kuziva vadzidzi somunhu chokutanga uye kupa mhoteredzo uye kutsigira nechokwadi zvedzidzo uye pachedu vavo vabudirire.
Interdisciplinary kubatsirana: Kutsigira overarching misoro pazvinhu zvose kuti akamupinganidza Yedzidzo dzakabatana uye kugadzirisa zvinokosha mikana uye nematambudziko iyo Chirangaridzo ari kunyanya akaiswa zvakanaka kuvaka munyika nepasi rese vakaziva kukwanisa.
kuenderera: Achiita nenzira zvakatipoteredza, mune zvoupfumi uye kutsigira zvemagariro nehurumende, zvedzidzo uye tsvakurudzo zvirongwa.
Chirangaridzo University ane pazvikoro ina, mumwe nomumwe wayo munuhwi norunako. Purovhinzi wacho guta guru, St. Johani, ndiko kumusha St. kembasi yaJohani inopa yakazara siyana Yedzidzo zvirongwa ari ano, Urban marongero. Also riri St. John ari theMarine Institute, Canada vaitungamirira muzinda Fisheries uye zvomumvura kurovedza uye mumwe makurusa zvivako zvomumvura yedzidzo munyika. Grenfell kembasi, iri Corner Brook kurutivi yevedza kumadokero echitsuwa chacho, ari kusununguka unyanzvi uye nesayenzi kembasi kushandisa kwezvakatipoteredza nomucheka Arts zvirongwa.
Chirangaridzo kuti kudzidzisa uye kudzidza mikana vawedzere mhiri mudunhu Newfoundland uye Labrador. MuUnited Kingdom, ari Harlow pazvivako, rakagumbatirwa sokunofadza taundi Old Harlow, zimbabwe, ibhuku rakasiyana maonero iyo kudzidza, tsvakurudzo, uye kuongorora zviri European Union.
Uyezve, Chirangaridzo yeYunivhesiti 450 kure dzidzo makosi zvigoneke kuratidza mukirasi enyu mhiri miganhu, zvichiita kuti ubvume zvedzidzo ubanguranyika pose.
Bachelor bhizimisi adhimini
International tsvimborume bhizimisi adhimini
Joint tsvimborume kana unyanzvi uye tsvimborume yezvokutengeserana (Co-op)
Bachelor dzidzo (chikuru / zvokutanga) somunhu wokutanga dhigirii
Bachelor dzidzo (chikuru / zvokutanga) sezvo kechipiri dhigirii
Bachelor dzidzo (zvenguva / yechipiri)
Bachelor dzidzo (zvenguva / yechipiri) conjoint pamwe Diploma dzidzo michina
Bachelor mimhanzi conjoint pamwe tsvimborume dzidzo mumhanzi
Bachelor dzidzo mumhanzi (sezvo kechipiri dhigirii)
Bachelor of dzidzo chaiyo
Human Kinetics uye Recreation
Bachelor of kinesiology (Co-op iripo)
Bachelor zvinotivaraidza (Co-op iripo)
Bachelor of dzidzo chaiko (Co-op iripo)
Humanities uye Social Sciences
Joint tsvimborume ounyanzvi uye tsvimborume yezvokutengeserana (Co-op)
Bachelor sayenzi (chitoro chemishonga)
Bachelor evanhu basa
Memorial University of Newfoundland ndiye asiri chemasangano yunivhesiti iri St raJohani, Newfoundland. Chirangaridzo University akatanga sezvo Chirangaridzo University College (mục), iyo yakavhurwa September 1925 panguva kembasi musi Parade Street mu St. Johani.
Mutungamiri Wokutanga akanga J. L. Paton. It akapa mbiri makore zvidzidzo yunivhesiti yokutanga. Mục kwekutanga okuverengwa rakanga 57 vadzidzi, achifumira kuti nhamba pamusoro 400 ari 1940s. mu 1933 izvozvo akabatanidzwa pamwechete pedyo Normal School uye akatora mutoro mudzidzisi kudzidzisa. Mumakore College vepakutanga nayo vakapiwa vaipiwa rutsigiro kubva Carnegie Corporation of New York.
The koreji rakavambwa kuva chirangaridzo Newfoundlanders vakanga varasikirwa noupenyu hwavo pamusoro muchiuto panguva World War First. Zvakanga Papera ndokutsaurirazve kuti uyewo kunosanganisira dunhu racho hondo vakafa Second World War. Alan Beddoe akagadzira nguvo maoko Chirangaridzo University of Newfoundland. The post-Confederation hurumende akakwidziridzwa mamiriro Memorial University College kuti zvizere payunivhesiti kwemaonerwo August 1949, renaming kupfungwa kuna Memorial University of Newfoundland. Chirangaridzo University kwairatidzwa Chirangaridzo University Act.
The anyorese Mun wokutanga gore rakanga 307 vadzidzi. mu 1961, Kunyorwa wakati yakawedzera kuti 1400, Mun akatama kubva Parade Street yokuva nzvimbo musi Elizabeth Avenue (Main kembasi).
On 8 Kurume 1965, hurumende Newfoundland yakazivisa vakasununguka muripo kutanga gore vadzidzi vakanyoresa pana Memorial University mu St. Johani. The rorusununguko Medicine pamusoro Memorial University of Newfoundland yakatangwa 1967, uye vadzidzi vokutanga vakanga akabvuma mu 1969. It anobvuma anenge 80 vadzidzi kupinda M.D. chirongwa nerimwe gore, uye anopawo M.Sc. uye Ph.D. zvirongwa.
Mun anoramba ane kembasi muna Harlow, England iyo rokusuka vadzidzi 1969. kembasi Izvi zvave yakakurumbira nzvimbo internships muna Education, uye ikozvino anopa chikwereti makosi, basa mazwi, uye internships munyika dzinoverengeka munzvimbo. The kembasi rinokwana anenge 50 vadzidzi.
Chirangaridzo akasimbisa Institut Frecker mu St. Pierre mu 1973, kupa imwe-kwetemu French kunyudza zvirongwa. Rakanga muNzvimbo muchivako inopiwa ari archdiocese pamusoro St. Pierre kusvikira 2000. Zvino sevatsigiri Program Frecker, zviri pari kumhanyira kubva FrancoForum, mumwe mutauro kudzidzisa Zvivako muridzi nehurumende St. Pierre. Chirongwa iri pamwe kunotsigirwa hurumende Canada uye Newfoundland uye Labrador.
In September 1975 mumwe kembasi yakavhurwa Corner Brook; zvakanga kutanga zita Sir Wilfred Grenfell College mu 1979 uye zita zvakare muna 2010 sezvo Grenfell kembasi, Chirangaridzo University of Newfoundland. pari zvino 1300 vadzidzi vanopinda Grenfell, iyo inopa dhigirii zvizere zvirongwa zviri anoranga akawanda, kusanganisira Arts Fine, uye haasaruri zvirongwa, iyo inogona kupedziswa huru ritenderane, mune dzimwe nyaya dzakawanda.
mu 1977, Chirangaridzo University of Newfoundland Educational Terevhizheni Center chinozoiswa ari Telemedicine chirongwa.
mu 1992, ari Institute of Fisheries uye Marine Technology mu St. Johani zvakazivikanwa vemumapato Mun sezvo Fisheries uye Marine Institute of Memorial University of Newfoundland. Nhasi zvinonzi vakatumidza Marine Institute of Memorial University of Newfoundland. Rinopa zvose nedhigirii uye asiri dhigirii zvirongwa.
mu 2008, yunivhesiti yacho mubayiro muitiro kuti kuuya mapurezidhendi akauya pasi kuongororwa enyika kuvhiringidzwa nedzidzo mudunhu racho gurukota, Joan Shea.
Unoda kurukura Memorial University of Newfoundland ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Memorial University of Newfoundland musi Map
Photos: Chirangaridzo University of Newfoundland pamutemo Facebook
Memorial University of Newfoundland wongororo
Join kukurukura pamusoro Memorial University of Newfoundland.
Chazanow University Toronto